Trano fananganana fiangonana - Sehatr'andro - Aostralia
Home » Listings » Trano fananganana fiangonana - Sehatr'andro - Aostralia
Eo ivelany, misy tafo be dia be eny an-tampon-kavoana manopy maso ireo andian-jiro tsara tarehy mamelana voninkazo sy mijery any an-dranomasina any ivelany. Zavamaniry tsara tarehy, mangalahala amin'ny hazo fihinam-boa sy ny voaloboka, manasongadina ny habetsahan'ny 2072m2, (.51 acre).
Misy toerana malalaka ho an'ny sambo na tranokala ary fiara 15-minitra fotsiny ho any afovoan'i Portland, ary Pivot Beach, iray amin'ireo distrika misy tora-pasika maro. Manomàna rano amin'ny andro mafana, sao dia mandeha lavitra kely fotsiny ianao Narrawong fiaramanidina fiarahamonina fiarahamonina Misy tetezana marobe raha te hanipika tsipika fanjonoana ianao! Hita eo akaikin'ny sekoly fanabeazana fototra ao an-toerana.
Taona namboarina: 1904
Previous ListingLAKEFRONT LOG HOME, Tahaka ny New - 5.85 AcresNext ListingCastle for Sale, Castle of Alamo